Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Nnukwu ajọ ifufe Ida na egwu maka mpaghara New Orleans
Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ebibi ala nke Hurricane Ida dị nso taa maka South Louisiana, na nso New Orleans na United States.
Oké ifufe mmiri, ikekwe nke kacha sie ike ruo afọ 150 nwere ike ibilite n'oké ifufe nke 5, na ịdaba n'oké ifufe a abụghị ihe a na -apụghị izere ezere.
Hurricane Ida dị mkpụmkpụ nke Hurricane 5 Storm a na -atụ anya na ọ ga -akụ na South East Louisiane Coast na Kentucky, USA n'ihe dị ka elekere abụọ nke abalị. Mmetụta kachasị njọ na -atụ anya na ọ ga -abụ ihe dịka kilomita 2 site na New Orleans.
Nke a nwere ike bụrụ oke ebili mmiri nke edere na United States ihe karịrị afọ 150
Ndị mmadụ na -akwaghị ebe ọ bụla kwesịrị ịma maka oke ifufe nke oke osimiri nke 15ft, tornados na mgbakwunye na ifufe ifufe nke 150+ mph.
N'elekere ise nke ụtụtụ obodo ahụ, oké ifufe ahụ ka na -esiwanye ike.
Ngalaba nche obodo niile nọ na njikere inyere aka mgbe oke mmiri ozuzo gafere.
Ndị ụlọ ọgwụ na-arụkarị ọrụ n'ike n'ihi nnukwu COVID-19 na-abawanye.
Ka ọ dị ugbu a, ọsọ ifufe dị 150 mph, naanị kilomita 7 dị mkpirikpi nke oke ifufe 5.
Ndị na -ekwuchitere ụlọ ọrụ nkwari akụ na New Orleans kwuru na ụlọ nkwari akụ dị njikere ichekwa ndị ọbịa.
Ọtụtụ ndị ọbịa na -erepụ na Arkansas, Texas, Louisiana site na ndị ọbịa si South Louisiana na -agbalị ịgbanarị ajọ ifufe Ida.
Nke a bụ ọhụụ ọ dịghị onye chọrọ ịhụ na satellite. Ida, ajọ ifufe nke otu 4 nke nwere oke ikuku nke ugbu a 145mph na -aga n'ihu na -abịaru ndịda ọwụwa anyanwụ Louisiana. Nke a ka bụ ọnọdụ egwu, nke na-eyi ndụ egwu. Nọrọ na -ege ntị maka mmelite ugboro ugboro. #iwu #mswx pic.twitter.com/SMs227S3CH
A na -atụ anya na oke mmiri ozuzo ahụ ga -agafe na ụfọdụ ụlọ ọrụ kemịkal. Nke a emebeghị mbụ ma na -enye nsogbu dịka ndị ọkachamara siri kwuo.
Ozi a dị ka elekere isii nke ụtụtụ mpaghara mpaghara:
Nwelite Hurricane Ida Tropical Cyclone NwS National Hurricane Center Miami FL AL092021 600 AM CDT Sun Ọgọst 29 2021 ... NOAA PLANE na -achọta IDA siri ike ... Akụkọ sitere n'ụgbọ elu NOAA Hurricane Hunter na -egosi na oke ikuku na -adigide arịala elu ruo na nso 4 mph (150 km/h) na nnukwu ebili mmiri. Nrụgide kacha nta kacha nta e mere site na data ụgbọ elu nyocha bụ 240 mb (935 na). Otu ọdụ ụgbọ elu NOAA C-MAN dị na Pilot's Station East dị nso na Southwest Pass, Louisiana, kọrọ na nso nso a ikuku na-aga n'ihu nke 27.61 mph (82 km/h) na oke ikuku ruo 131 mph (107 km/h). Ụlọ ọrụ NOAA ọzọ dị elu na C-MAN na Southwest Pass kọrọ na nso nso a ikuku na-aga n'ihu nke 172 mph (77 km/h) na oke ikuku nke 124 mph (93 km/h). Nchịkọta nke 150 AM CDT ... 600 UTC ... Ozi ------------------------------------ ------------ ọnọdụ ... 1100N 28.3W gbasara 89.4 MI ... 75 KM SSE nke GRAND ISLE LOUISIANA N'IME 120 MI ... 60 KM SSW OF OF OF MISSISSIPPI RIVER MAXIMUM SINTAIN WINDS ... 95 MPH ... 150 KM/H ỌGWỤ N'ihu ugbu a ... NW OR 240 DEGREES NA 315 MPH ... 15 KM/H MINIMUM CENTRAL PRESSURE ... 24 MB ... 935 INCHES
Izu Ejiji Seychelles n'ihe ngosi
Ndị nọọsụ Ontario: Nchegbu n'ili na atụmatụ ịmalitegharị ọhụrụ